Ahụmahụ Ezigbo Malta
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » omenala » Ahụmahụ Ezigbo Malta
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • omenala • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ na -agbasa ozi Malta • News • Iwughachi • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Ezigbo Malta - mlọ Ugbo © Malta Tourism Authority
Enwere ọtụtụ ụzọ mmadụ nwere ike isi gaa Malta, ihe zoro ezo nke Mediterenian. ka ị na-anọ nchebe ma nwee ntụsara ahụ n'oge oge a na-ejighị n'aka. Ọbịa nwere ike ịchọpụta agwaetiti nwanne agwaetiti Malta, Gozo, na Comino site na-ebi ndụ dị ka a obodo. Inye ahụmịhe Malta ka doo anya, mmadụ nwere ike ịgbazite ụlọ ọrụ ugbo na akụkọ ihe mere eme na Gozo ma ọ bụ ụlọ okomoko mara mma na obodo nta dị na Malta. Ndị enyi, ndị di na nwunye, ma ọ bụ ezinụlọ ndị na-emekọ njem ọnụ nwere ike izere ihe ize ndụ nke iso ndị ọbịa ndị ọzọ kerịta ohere. Oge ezumike ndị a na-enyekwa ndị ọbịa ohere pụrụ iche iji mikpuo onwe ha na ọdịbendị na nri mpaghara.
Gozo n'onwe ya ejiriwo eziokwu mara mma. Gozo pere mpe ma e jiri ya tụnyere nwanne ya nwanyị bụ Malta, nwere oke osimiri na coves mara mma, mmiri mmiri klaasị ụwa, saịtị akụkọ ihe mere eme, gụnyere obodo Vittoriosa na UNESCO World Heritage Site, Ġgantija Temple. Ihe niile dị nso na nso nso. Ugbo na tebụl nri B Go Gozo, ma na-ahọrọ ịzụ ahịa na ahịa mpaghara maka ndị ọkachamara Gozatan ma ọ bụ na-enwe ọtụtụ ụlọ oriri na ọ neighborhoodụ neighborhoodụ dị n'ógbè ahụ. Enwere otutu ulo oru ugbo, otutu nwere ihe ndi ohuru, ọdọ mmiri nke onwe na echiche di egwu. Maka ama ndi ozo banyere ulo oru ugbo Gozo gara Ebe a.
Ọrụ Nri Onwe
Enwere ike iji kichin ụlọ ebe a na-ere ihe ọkụkọ wee nwee ọmarịcha nri ndị dị na mpaghara ọhụụ ma ọ bụ na mmadụ nwere ike ịnụ ụtọ nri gourmet nke onye isi obodo na-edozi ya. A na-agbanwe menu mgbe ụfọdụ dịka oge, nnweta, ma ọ bụ mkpali nke siri nri. Maka ozi ndị ọzọ, ọrụ siri ike nkeonwe dị na nleta Gozo Ebe a.
Agwaetiti Maltese jupụtara na afọ 7000 nke akụkọ ntolite. Valletta, Isi Obodo, na UNESCO World Heritage Site, bu ezigbo ebe iji gbazite ulo uka, ulo ma obu ulo. Ndị ọbịa na-anọ n'otu n'ime ebe obibi ndị a pụrụ iche na mgbe mgbe, na-enwekarị echiche ndị magburu onwe ha, nwere ike ịnụ ụtọ ihe eji eme ọgbara ọhụrụ na ụfọdụ nwere ọdọ mmiri ọdọ mmiri, ụlọ akwụkwọ nzuzo, na saunas. Zọ kachasị mma iji gbagharị ma chọpụta Valletta, European Capital of Culture 2018, bụ ụkwụ. Chọpụta ọtụtụ ebe nrụọrụ ọdịnala, ụlọ ahịa, ụlọ oriri na ọ localụ localụ dị na mpaghara, ma nwee obi ụtọ nke ndụ abalị. Maka ama ndi ozo banyere obodo ndi ozo na Malta, gaa Ebe a.
Mdina, isi obodo izizi nke Malta, bụ obodo ochie nwere mgbidi nwere ngwakọta nke ọwa ochie na nke Baroque. Oge na-adịghị agafe agafe na akụ na ụba na okpukpere chi ebe niile, zuru oke maka ịgagharị ụkwụ. N’elu ugwu dị n’elu ugwu, Mdina na-enwe ọmarịcha echiche panoramic nke Mediterranean.
Obodo Mdina, ya na agwa ya enweghi oge, nwere akuko n’ile anya karie afo 4000. Omenala na-ekwu na n’ebe a n’afọ 60 AD a sịrị na St. Paul the Apostle biri ndụ mgbe ụgbọ bibisịrị n’agwaetiti ndị ahụ. Akpọrọ grotto ahụ a maara dị ka Fuori le Mura, ebe o nwere ike biri, bụzi ebe a na-akpọ St Paul Grotto na Rabat. Lamplit n'abalị ma kpọọ ya "obodo ahụ dị jụụ," Mdina na-adọrọ mmasị ileta maka saịtị ọdịbendị na nke okpukpe.